October 8, 2019 - khitalinmedia
October 8, 2019 Khitalin Media 0
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ လူငယ်လေးနှစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးသံသယရှိမှုနဲ့ လူမြင်ကွင်း မြန်မာပလာဇာမှာ လက်ထိပ်ခပ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မူးယစ်ဆေးပြားလို့ ယူဆရတဲ့ အပြား ၁၁ ပြားကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ဒါဟာ မူးယစ်ဆေး ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ ဓာတုဗေဒဆေးစစ်ချက်တွေရမှသာ […]
ဘယ်လိုကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာ၊ သူတို့မှာ ဆိုးရွားလှတဲ့ အနာရောဂါတွေ ဖြစ်နေတာမျိုးကို မြင်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သိတတ်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကို ချစ်ကြတာချည်းပါဘဲ။ အခုသတင်းလေးကတော့ Mirror သတင်းမှာ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး၊ ApannPyay ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဟာ ဖခင်မှာ စွဲကပ်နေတဲ့ […]
အနေဝေးတဲ့ချစ်သူတွေ (LDRS) တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြတာတွေက အများကြီးပါ။ အတူမရှိနိုင်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေဟာ အတူရှိတဲ့ချစ်သူတွေလောက် ချစ်သူသက်တမ်းမကြာကြဘူး၊ အနေဝေးတဲ့ချစ်သူတွေအကြား ယုံကြည်မှုဟာ မြန်မြန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်..စသဖြင့် ဆိုးကွက်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့။ ဒီနေ့ခေတ်လို အချိန််မျိုးမှာတော့ တစ်နယ်စီ၊ တစ်မြို့စီကလူတွေကို ချစ်သူမတော်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီး ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…. (၁) အဆက်အသွယ်နည်းနည်းပြတ်သွားတာနဲ့အဆင်မပြေကြတော့တာ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ ယမန်နေ့က မူးယစ်ဆေးဝါးမှုကြောင့် ဖြိုးပြည့်စုံ ထိန်းသိမ်းခံ ရတယ် ဆိုတဲ့သတင်းက ပရိသတ်တွေကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေခဲ့ တာပါ။ ဖြိုးပြည့်စုံ တစ်ယောက် ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုအဖမ်းခံရတာလည်း….ဖြိုးပြည့်စုံ တစ်ယောက် ဘယ်လိုလူမျိုုးလည်း ဆိုတာကို တေးရေး မင်းချစ်သူ က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ပြောဆိုရပ်တည်လိုက်ပါတယ်။ […]
မနက်​​ဖြန် ဗစ်တိုးရီးယားလေး အမှု ၈ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းစတင်မည် ဗစ်တိုးရီးယားအဖေက ဆရာတို့၊ မရွက်နုတို့ ထွက်သွားလေမလားနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အမြဲ စိတ်ပူနေရတာ…တဲ့ နက်ဖြန်ဆိုရင် သမီးလေးဗစ်တိုးရီးယား အမှုအတွက် ၈ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပတ်ရုံးချိန်းမှာတော့ WH ကျောင်းက ဒေါ် […]
Silica Gel Bags တွေကိုဘာလို့ လွှင့်မပစ်သင့်တာလဲ မုန့်ဘူးတွေ ကင်မရာဘူးတွေ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေ ပါတဲ့ အိတ်လေးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအထုပ်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ အသုံးမလို လောက်ဘူး အန္တရာယ်ရှိမလားမသိဘူးဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီအိတ်လေးတွေက […]
အ ချိူ့သော အိမ်တွေဟာ အိမ်သား အချင်းချင်း မသင့်မြတ်တာ /ငွေဝင်သမျှအကြောင်းရှာပြီးကုန်ကျနေတာ /အိမ်သားတွေ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ စသည်ဖြင့် …. တစ်မျိူးပြီး တစ်မျိူးဖြစ်ပြီး အိမ်ပူ၍ စီးပွားမတက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါ အစီအရင် များကို ပြုလုပ်ပါ။ နံနက် ၆နာရီတွင်ဖြစ်စေ ညနေ ၆နာရီတွင် ဖြစ်စေ လှူဒါန်းပါ။ အေ […]
အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ တေးရေးဆရာ နှစ်ဦးတို့ကို သတင်းပေးမှုအရ မူးယစ်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာပလာဇာ ရှော့ပင်းမောလ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ သတင်းက တော်တော်လေး ဟိုးလေးတကြော်ကြော် ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံအတွက် ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ဖြစ်နေကြသလို မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ […]
ကိုယ်နဲ့ ဖူူးစာ ပါမပါ ဘယ်လို တွက်ကြည့်မလဲ ..။မိန်းကလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ယောကျ်ားလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်.. ဒီနည်းလမ်းလေး ဟာ နာမည်ကျော် ဗေဒင် ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ တွက်ချက်နည်း […]
ကြမ်းပိိုးဟာ ကပ်ပါးအင်းဆက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ သွေးကိုိစုပ်ယူ စားသောက်ကြတဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွွန်မြန်တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ြ်ပီး၊ ပုန်းခိုရာမှာလည်း တော်ကြပါတယ်။ ကြမ်းပိုးတွေ များလာလေ အိပ်စက်ရတဲ့ အရသာက လွတ်လပ်မှု မရှိလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကြမ်းပိုးတွေကို အမြန်ဆုံး နှိမ်နှင်းဖို့အတွက် အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို Shwemom ပရိသတ်ကြီးအတွက် […]